Itoophiyaa bara 2012'tti : Filannoo, lakkoofsa ummataa, dhimma Sidaamaa… - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaa bara 2012'tti : Filannoo, lakkoofsa ummataa, dhimma Sidaamaa…
Guyyaa kaleessaa, Kamisa, bara 2012 kan simatan lammiileen Itoophiyaa wantoota ijoo biyyattii keessa raawwatuf jedhanif walumaan fudhatan.
Barana Itoophiyaan filannoo, lakkoofsa ummataafi dhimma rifarandamii Sidaamaa dabalatee kaan ni raawwatu.
Waggaan bara 2012 waggaa biyyattiin, bulchitoonniifi lammiileen itti ko'oomanidha. Dhimmoota ijoo eegaman muraasa qofa waliin haa ilaallu.
Erga MM Abiy aangootti dhufan filannoon taasifamuuf jedhu kuni kan duraati.
Dhaabbileen siyaasaa dorgomaa ta'an filannoon yoom haa taasifamu kan jedhu irratti yaada garaa garaa lama qabu; yeroo qabametti haa taasifamu kan jedhuufi achi haa darbu kan jedhu.
Walgahii tibba darbe taasisen dhaabni biyya bulchaa jiru, ADWUI'n, yeroo qabametti akka taasifamu akka barbaadu ibseera.
'Filannoon yerooma qabameefiitti gaggeeffama'
Filannoon barana taasifamu garuu sababoota hedduuf waan haaraa qaba.
Inni duraa filannoo biyyaalessaa qofa osoo hin taane filannoo mana maree bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa akkasumas filannoon naannoo barana ni taasifama.
Akkaataa kana duraan taanaan filannoon biyyaalessaa walii erga takka ahin raawwatu ture. Dhimma rakkoo nageenyaafi kaanin waggaa baranaatti dabarfamuun isaa ni yaadatama.
Inni lammataa immoo filannoo baranaa kan adda taasisu paartileen siyaasaa bara Haayilasillaasee jalqabee biyyaa bahan erga MM Abiy aangootti dhufani as biyyatti deebi'an irratti qooda fudhachuu isaaniiti.
Yeroo ammaa paartileen siyaasaa 100 ol Itoophiyaa keessa socho'u. Kanneen keessa kan kanaan dura qabsoo waraanaa gaggeessaas turan ni jiru.
MM dhimma filannoo dhufuurratti paartilee waliin mari'atan
Paartileen kuni baay'achuurra akka walitti dhufani ijaaraman irra deddeebbiin gaafatamus hanga yaadame akka hin milkoofne xiinxaltoonni himu.
Inni sadaffaa dhimma filannoon walqabatee kana dura komiin guddaa qaama filannoo gaggeessu, Boordii Filannoo Biyyaalessaa, irratti ka'aa ture.
Baran garuu boordiin filannoo kan gaggeessan dubartii dhaaba mormitu hogganaa turan, Aadde Birtukaan Miidhaksaati.
Aadde Birtukaan Miidhagsaa hoggantuu Boordii Filannoo ta'uun muudaman
Filannoowwan kana dura gaggeeffaman komjii irratti ka'an sirreessuun filannoo haqa qabeessa taasisuf akka yaadan MM Abiy Ahimad irra - deddebbiin waadaa seenuun isaanii ni yaadatama.
Lakkoofsi ummataa Itoophiyaa waggaa 13 dura taasifame. Dhimmoota rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e lakkoofsi ummataa irra deddebbiin achi darbe barana akka taasifamu ni eegama.
Lakkoofsa ummataa Itoophiyaa miiliyoona 100 caale sadarkaa hawaasummaafi kaan ummanni irra jiru baruf lakkoofsi taasifamu filannoo biyyattiin taasistu irratti bu'eera.
Lakkoofsa ummataa kana dura taasifameen jaarmiyaaleen lakoofsi ummata isaan bakka bu'an akka xiqqaate eeruun kan kaasan ni jiru.
Waa'ee lakkoofsa ummataa fi manneeniirratti qabxiiwwan muraasa
Ummanni Sidaamaa waggoota 10 olif bulchiinsa Godina irraa Naannoo akka ta'uf gaafachaa ture.
Dhalattoonni Sidaamaa gaaffiin isaanii akka lafarra harkifateefi mootummaan gurra akka isaan dhorkate amanu.
Erga MM Abiy Ahimad aangootti dhufani as gaaffiin kuni cimus baatii Adoolessa bara darbe, 2011, keessa yaaliin naannicha 'humnaan' labsu mootummaa federaalaa waliin dargaggoota buuseera.
Rifarandamiin Sidaamaa baatii Sadaasaa keessa ka taasifamu yoo ta'u dhimmoota isaan waliin walqabate dhufu waliin yeroo fudhachuu mala.
Rifarandamii booda murtii darbu, qoodinsa qabeenyaafi kaan Boordii Filannoo filannoo biyyaalessaaf qophaa'utti jiruf hojii dabalataati.
Irreechi waggaa dheeraa booda magaalaa Finfinneetti barana ni kabajama.
Ayyaana Oromoon ganna keessaa birraatti ce'u isaaf Waaqa itti galateeffatu kuni yeroo dheeraaf akka hin taasifamne dhorkamee ture.
Waggaa darbe akka Finfinneetti taasifamu Abbaan Gadaa duraanii Bayyanaa Sambatoo BBC'tti himanis osoo hin ta'in hafeera.
Ayyaana Irreechaa barana taasifamuf qophiin kan eegalame yoo ta'u bakkiin itti raawwatus gidduu magaalaa Finfinnee naannoo 'Filwuhaa' jedhamun beekamutti
Gama kubbaa miilaan gulaalliin Itoophiyaan Waancaa Addunyaa bara 2022'f taasistu itti fufa. Yeroo darbe galchii dirree ala Leesotootti galchiten ramaddii garee gulaalliif taphatan keessa seenuun ni yaadatama.
Atileetiksiitin tibba ayyaana Masqalaa Shaampiyoonaan Atileetiksii Addunyaa biyya Qataar, magaalaa Dohaatti taasifama.
Dorgommiin atileetiksii Itoophiyaan maqaa gaarii irratti qabdu bara bulchiinsa Atileet Daraartuu Tulluu yeroo taasifamu kuni kan duraati.
Dorgommii waggaa lamaan al takka taasifamu kana irratti atileetota ulaagaa guutan Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa tirban darbe ifa taasiseera.
Gama kaaniin, Olompikiin Tookiyoo bara 2020 A.L.I baati Adoolessa bara 2012 ni taasifama. Waltajjii atileetiksii guddicha gurra lammiilee Itoophiyaa harkisu kana irratti qabxiin galmaa'ullee dhimma biyyaalessaa ta'un ijoo dubbii ta'a.
Kanneen ala dhimmoota hawaasumaafi kaan Itoophiyaa keessatti bara 2012'tti eegaman ni jiru.
MM dhimma filannoo dhufuurratti paartilee morkattotaa waliin mari'achaa jiru
Warshaan Ispoonjii Qastadammanaa ibiddaan gubate